Accueil > Gazetin'ny nosy > Atrikasam-panjakana : Natao handaniana ny volam-panjakana
Atrikasam-panjakana : Natao handaniana ny volam-panjakana
Raha mandeha amin’ireo hôtely lehibe eto Antananarivo isika amin’izao fotoana izao dia feno atrikasam-panjakana avokoa ny toerana rehetra. Tao anatin’ny volana novambra iny sy ny tapaka ny volana oktobra dia efa nahatratra hatrany amin’ny 200 ny atrikasam-panjakana natao manerana ny nosy. Manampy azy ireo ny fikambanana tsy minakina amin’ny fanjakana (ONG) izay mifandray amin’ny fanjakana ary manao asa fampandrosoana eto Madagasikara hono.
Raha ny fanadihadiana izay nataonay dia mahatratra hatrany amin’ny 200 tapitrisa ariary no vola lany amin’ireny atrikasa ireny amin’ny toeram-piasana maro. Vola tsy lany tao anatin’ny taona ka tsy maintsy laniana hono raha tsy izay tsy mahazo hafa koa na very fotsiny ilay vola.
Ao anatin’izany ny hofan-trano izay midangana satria mahatratra hatrany amin’ny 5 tapitrisa ariary ny iray andro raha kely indrindra. Ny sakafo dia hatrany amin’ny 20 tapitrisa any ho any ary ny saran-dàlana sy saram-pivoriana izay omena ireo mpandray anjara mahatratra hatrany amin’ny 10 tapitrisa any ho any ho an’ireo izay manainga mpivory avy any amin’ny faritra. Ny hofan’ny hôtely dia hatrany amin’ny 50 tapitrisa any ho any mandritra ny andro maromaro ipetrahany eto Antananarivo.
Izany no andaniana ny volam-panjakana. Inona nefa no ivoriana amin’izany?
Raha tsy ny tombana ny zavatra vita nandritra ny iray taona dia ny fanamafisana ny traikefa ho an’ny mpikambana. Dia mitovitovy amin’izany daholo no andaniana ny volan’ny fanjakana ao satria hono tsy maintsy laniana alohan’ny faran’ny taona izy ireo.
Tsy mahagaga raha mahantra i Madagasikara. Matetika koa dia amin’io vola io no anaovana risoriso sy kolikoly ka angalaran’ireo mpitondra sasantsasany ny volam-panjakana.